Port-Harcourt Mall explosion: Gaasị agbaala merụọ mmadụ ise ahụ na Port-Harcourt - BBC News Ìgbò
Port-Harcourt Mall explosion: Gaasị agbaala merụọ mmadụ ise ahụ na Port-Harcourt
12 Juun 2019
Akụkọ ndị dị mkpa taa:
Gaasị agbaala merụọ mmadụ ise ahụ
Nkenke aha onyonyo Ọkụ tanka agbala ọtụtụ mmadụ na oge gara aga na Legos
Ọnụ na-ekwuru ndị Uweojii na Rịvas steeti bụ Nnamdi Omoni gwara BBC Igbo na ọdachi ahụ mere n'ebe Elekere atọ nke ehihie ụbọchị Wenezde.
O kwuru na mmadụ ise merụrụ ahụ na 'Port-Harcourt Mall' ebe e bugara ha ụlọogwụ maka nleta.'
Ọ gara n'ihu kwuo na ndị ọrụ ha na-enyocha iji mata ihe butere ihe ahụ gbara nụ.
Ụgbọelu ndịagha ụgbọelu dara n'ike na Katsina
Image copyright @NigAirForce
Nkenke aha onyonyo Ugboelu ndịagha Naijiria oge ha na-enwe ọzụzụ
Ụgbọelu Ndịagha ụgbọelu dara n'ike n'ọdọụgbọelu Katsina oge ha na-alọghachi site n'ebe ha gara ọgụ megide ndị omekeome na mpaghara ọdịda anyanwụ Ugwu Naijiria.
Ozi si n'aka ndị isi ndịagha ụgboelu kwuru na o nweghị onye tufuru ndụ ya n'ọdachi ahụ.
Akwamozu ndịagha ụgbọelu Naijiria nwụrụ n'ọdachi ụgbọelu
Dana: Oke mmiri kwagharịrị ụgbọelu anyị
Ha gara n'ihu kwuo na ha ehiwela otu ga-elebanye anya n'ihee butere ihe mere.
Image Copyright @NigAirForce @NigAirForce
Democracy Day: Emezuola m nkwa atọ m kwere- Buhari
Image copyright Getty/ BBC
Dika e mere ncheta ochịchị onyekwuoucheya, ubochi Wednesday onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari ekwuola na ya mezuru nkwa nchekwa, nkwalite akụnaụba na agha megide nrụrụaka o kwere afọ anọ gara aga.
N'ozi ya ụbọchị Wenezde, onyeisiala Muhammadu Buhari, ọ rụtụrụ aka na ya kwere nkwa atọ; nchekwa, ịkwalite akụnaụba na ibu agha megide nrụrụaka ma kwụọ sị, " ọ nweghị onye ga-agbagha na m emezuola nkwa ndị a niile."
Ọ kọwara na ụbọchị June 12 bụ ụbọchị pụrụ iche n'ihi na ọchịchị nkịtị sị na aka ndị nkịtị banyekwa n'aka ndị nkịti.
Ọ gara n'ihu kwuo na "E nyere m Inec ohere ịrụ ọrụ ha na-enweghị mgbochi ọbụla."
O kerele ndị Naijiria maka ị tụnyere ya na ntuliaka 2019 ma kelee ndị ọrụ nchekwa maka iti ya onwe ha n'ihe egwu dịka ha na-echekwa ụmụ Naijiria.
Democracy Day Speech: Buhari gbara ọnyụpa na nkwa o kwere - Ohaneze
Mana otu Ohaneze Ndigbo agbaghaala okwu onyeisiala Buhari kwuru na ya mezuru nkwa ya dịka o si gbasa nchekwa, akụnaụba nakwa ọgụ megide nrụrụaka.
Odeakwụkwọ mgbasaozi Ohaneze bụ Chuks Ilegbu gwara BBC Igbo na ' Buhari gbara onyupa n'ihi na Boko Haram , ndị ntọ, ndị Fulani ọchịehi na ndị ohi ka na-akpa mkpamkpa na mpaghara dị icheiche na Naijiria.
Amaegwuregwu etiti bụzị amaegwuregwu Moshood Abiola
Nkenke aha onyonyo National Stadium Abuja bụzị Moshood Abiola Stadium
Buhari nọ n'emume ahụ gụgharịa amaegwuregwu etiti dị n'Abuja, Amaegwuregwu Moshood Abiola iji kwanyere MKO Abiola, ugwu.
Anyị ga-agba mkpebi ụlọikpe banyere Okorocha- Inec
Inec ekwuola na ha ga-agbagharị akwụkwọ n'ụlọikpe mkpegharị n'ihi iwu ahụ ụlọikpe nyere ka ha nye Rochas Okorocha asambodo mmeri, sị na emeghị otua ga-anwụnye aja na gari n' usoro ntuliaka na ọchịchị onyekwuo uche ya.
Jamb Cut off: Pọint e ji aba mahadum
Image copyright Jamb/webste
Jamb ekpebiela na onye chọrọ ịba mahadum n'afọ a ga-enwe opekata mpe akara otu nari na iri isii.
Na i mere nkeọma na Jamb apụtaghị na ị ga-aba Mahadum - Mahadum Lagos
UTME 2018: Ule Jamb ebidola
Gee akụkọ ndị a n'otu nkeji ebe a:
Maka nwaanyị egburu ụmụ ya n'Ebonyi
A nwụchiela mmadụ anọ eche gburu ụmụaka abụọ n'Ebonyi.
Aka ndị uweojii akpara mmadụ anọ a na-eche na aka ha dị n'ogbugbu ụmụaka abụọ otu nne ji n'Umuogodoakpu-Ngbo dị n'Okpuruọchịchị Ohaukwu n'Ebonyi steeti.
Ọnụ na-ekwuru ndị uweojii bụ Loveth Odah kwuru na otu onye ọzọ ndị ọjọọ ahụ meruru ahụ nọ n'ụlọọgwụ anata ọkwụkwọ, ebe ndị otu ha na-enyọnye anya n'ihe mere dị a jiri kpaa ụdị agwa a.
"Nwa m nwoke dị afọ 13 gburu nwa m nwaanyị"
'Ọkaiwu gburu di ya chere ya eche'
Okwuru na nna ụmụaka ahụ egburu egbu bụ onye bị n'Onicha lọtara bịa kwuo na ndị ya na-eche mere arụ ahụ bụ ndị ya na ha na-azọ ala.
Ọ sị na ndị ahụ kwere ya nkwa na mgbe ya ga-alọta na "ihe dị iche ga-adị n'ezinaụlọ ya".
Mmadụ anọ a nọ na aka ndị uwe ojii azara ọnụ ha ugbua.
Rochas enwetala asambodo mmeri
Image copyright Rochas Okorocha Facebook
Ụmụibe ka anyị bidonu na Imo steeti ebe Inec nọ n'Abụja ụnyahụ nye Rochas Okorocha asambodo mmeri dịka onye nọchite anya Imo West Senitorial districk.
Nke a na-eme ka ụlọikpe ukwu nọ n'Owerri nke Jọstis Ngozi Okoha nọ n'isi ya sị Inec ha anwakwala anwa nye ya ya bụ asambodo.
Taa bụ ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya
Ka anyị chetara ụnụ na taa bụ ụbọchị ezumike nye ndị ọrụ na Naijirịa gbaa gburugburu.
Taa ka gomenti etiti nyere maka ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya bụrụkwa ụbọchị akagburu ntuliaka nke MKO Abiola meriri afọ iri abụọ na isii gara aga.
Ngagharị iwe na Honk Kong
Nkenke aha onyonyo Ndị ngagharị iwe juru n'ihu ụlọomeiwu na Hong Kong
N'ofesi, dịka ngagharị iwe ka na-ebiri ọkụ na Hong Kong maka iwu gọmentị chọrọ itinye maka ikpe ndị dara iwu obodo ikpe na Chine ndị mmadụ akwụchiela ezi na ụzọ niile na mba ahụ.
Ka ọ dị ugbua ndị ụlọomeiwu akwụsịla itinye ọnụ na ya bụ iwu rụọ mgbe okwu dajụrụ.
US vs Thailand
Nkenke aha onyonyo Alex Morgan nke US abụrụ onye abụọ nyere goolu ise n'otu asọmpi iko mba ụwa ka Michelle Akers mechere otu a afọ iri abụọ na asaa gara aga
N'egwuruegwu iko mba ụwa ụmụnwaanyị, US afọọla Thailand aja n'ọnụ site nye ya ọkpụ goolu iri na atọ n'asọmpị ha ụnyahụ.
Ekere ha goolu otu otu ọfọdị atọ maka ndị nọ na benchi. Naịjirịa na South Korea ga-akwata ya na elekere abụọ nke ehihie.
Gee nkeji ụtụtụ
Ihe 11 ị na-amaghị maka Abiola
Ihe ndị Paul Kagame gwara Buhari banyere ibu agha megide nrụrụaka
Taa ka a ga-ama mbe ndị bụ oke n'ụlọomeiwu
Lee ihe nkriri anyị
Media caption9th Assembly: Ọ dịghị mfe ịchịcha dịka gọvanọ ma bụrụ Sịnetọ - T.A Orji
'A dụrụ ihe onyonyo ahụ tinyere m na nsogbu na mahadum Ghana adụ'
Ọnụ ahịa ihe a na-ere n'ahịa adaala n'ezie?
O nweghị onye na-akwanye m ọkụ n'ike ka m chutuo Eze Imo - Ihedioha